डेटा, टकटाइम, एसएमएस र निःशुल्क डिजिटल सेवाको बन्डलिङ सुविधा
काठमाडौं । एनसेलले युवाका लागि लक्षित गरी विभिन्न सेवाको बन्डलिंक्स सुविधासहित नयाँ स्टार्टर प्याक ‘सही यो ! पावर सिम’ योजना ल्याएको छ । यो सिममार्फत ग्राहकले अझ सुलभ दरमा सेवाहरू उपभोग गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ ।
यो योजनामार्फत पीआरबीटी, स्पोर्टिज, स्पोर्ट भिडियो पोर्टल, दामी म्युजिक र हंगामा म्युजिकप्रो निःशुल्क सुचारु गर्न सकिनेछ । प्रत्येक रू. १०० मेन ब्यालेन्सको खर्चमा डेटा बोनस पाउने यो सिमको मुख्य विशेषता भएको एनसेलले जानकारी दिएको छ । यस्तै ग्राहकलाई बोनसका रूपमा गेमिङ र म्युजिकको आनन्द दिलाउन एनसेलले आकर्षक डेटा प्याकहरूको व्यवस्था गरेको पनि बताएको छ ।
बिहीवार (आज) देखि लागू हुने योजनामा ग्राहकले करसहित रू. ९९ मा यो सिम खरीद गर्न सक्नेछन् । यो सिममा ग्राहकले रू. २० को मेन ब्यालेन्ससहित ७ दिन समयावधि रहेको २५० एमबी फोरजीसहित ५०० एमबी डेटा, १० मिनेट अन नेट टक टाइम र १०० ओटा अन नेट एसएमएस पाउनेछन् ।
सिमसँगै बन्डल भई आउने पीआरबीटी सेवा स्पोर्टिज, स्पोर्ट भिडियो पोर्टल, दामी म्युजिक र हंगामा म्युजिकप्रो सेवाहरू सिम सुचारु भएको मितिबाट ३० दिनसम्म मान्य हुने बताइएको छ । नयाँ स्टार्टर प्याक योजनामा ग्राहकले सिम सुचारु गरेको दिनको मध्यरातभित्रै रू. १०० वा सोभन्दा माथिको ब्यालेन्स रिचार्ज गरेको खन्डमा ३० दिनसम्म प्रत्येक दिन रू. १५० एमबी डेटा बोनस र माइफाइभ सेवा १२ महीनासम्मका लागि पाउनेछन् ।
साथै ग्राहकले प्रत्येक रू. १०० को खर्चमा २५० एमबी अलटाइम र २५० एमबी फोरजी बोनस डेटा १२ महीनासम्म प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि अन्य धेरै आकर्षक डेटा प्याक पनि रहेको एनसेलको भनाइ छ ।
बन्दा विक्री नभएपछि किसानले बनाए जैविक मल[२०७७ जेठ, १३]
बाफुखोलाका ५०० घरधुरी व्यावसायिक आलु खेतीमा[२०७७ जेठ, १३]
जनप्रतिनिधिद्वारा ५२ पत्रकारको ‘कोरोना बीमा’[२०७७ जेठ, १३]
‘डिशहोममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट’ योजनाअन्तर्गत १० जनाले पाए रू. १ लाख[२०७७ जेठ, १३]
मह विक्री नभएपछि किसानलाई चिन्ता[२०७७ जेठ, १३]